admin1 – Puntland Voice
Isimada Dowladda Puntland ee ay ugu horreeyaan Islaan Ciise Islaan Maxamed iyo Suladaan Siciid Maxamed Garaase ayaa maanta oo taariikhdu tahay 30 July 2018 waxay marti qaad u sameeyeen Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Ra’iisul-wasaaraha Dowladda […]
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa isniintii go’aamiyay qaraar ay AMISOM ku sii joogeyso Soomaaliya si nabad ilaalin ahaan ah ilaa May 31, 2019
.Waxaa kale oo isla qaraarka ku jira, in tirada AMISOM hoos loo dhigo, oo laga geeyo ilaa 20,626 bisha Feb. 28, 2019 iyo in lagu daro tiro booliis ah oo garaya ugu yaraan 1,040. Go’aan cusub waxaa uu ka hor […]
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Dhagax Dhigay Dekadda Garacad
Madaxweynaha dawladda Puntland ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha dekadda Garacad ee Puntland, dhismaha dekadda ayaa ku yimid isku tashi shacabka Puntland kuwasoo ay hormuud u ahaayeen ganacsato rer puntland ah, safarka madaxweynaha ayaa waxaa ku wehelinayey Qaar ka mid ah […]
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa caawa oo taariikhdu tahay 29 July 2018 waxaa uu casho sharf ugu sameeyay Hotelka AJJ PALACE Ra’iisul-wasaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane. Xassan Cali Khayre iyo weftigii balaadhnaa ee la socday. Madaxweynaha […]
Kulan si heersare ah loosoo agaasomey, oo ku saabsanaa Wacyigalinta Bulshada ee Qaranimada Wadaniyadda iyo Walaaltinimada Umadda Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay Hoolka Shirarka ee Hotel Uunlaaye ee magaalada Gaalkacyo. Kulankaan ayaa waxaa soo qabanqaabisay isla markaana qabray Madasha Nabadda & […]
Israa’iil ayaa sheegtay in ay toogasho ku soo ridday diyaarad kuwa dagaalka ah oo ay leedahay Suuriya,
taas oo gashay hawadeeda – arrintaas ayaana ah dhacdo naadir ah oo dhexmarta labadaas dal ee is haya. Gantaalo ayaa lagu riday diyaaradda dagaalka ee nooceedu yahay Sukhoi, sida ay Twitterka ku soo qoreen ciidammada difaaca ee Israa’iil. Dhacdadaasi waxay […]
Waxaa Magaalada Garoowe lagu Qabtay Kulan lagaga hadlayo (Awodaha Dhallinyarada iyo caqabadaha ku xayndaaban).
Kulanka waxaa soo qabanqaabisay dallada dhalinyarada Puntland ee PYAN waxaana kasoo qaybgalay inta badan dhalinyarada ku nool Magaalada Garoowe. Gudoomiyaha daladda dhalinyarada Puntland Uweys Axmed Sardheeye ayaa kulanka Furay. Waxaa khudbad ama muxaadaro ku saabsan mowdaaca ka jeediyey Ustaad Abdifitah […]
Maxkamadda caalamiga ah ee Caddaaladda ayaa go’aan ka soo saartay kiis ay soo gudbiyeen Qadar oo ka dhan ah Imaaraadka Carabta
.Qatar ayaa ku eedeysay UAE inay ku xadgubayso sharciyada caalamiga ah iyagoo barakiciyay kumanaan Qataris ah, kuwaas oo intooda badan ay qoysas u degganaayeen hantina ku lahaa Imaaraadka. ICJ ayaa ku amartay dowladda Imaaraadka in ay difaacdo xuquuqda muwaadiniinta u […]
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo taariikhdu tahay 23 July 2018 waxaa uu dib ugu soo laabtay Puntlnad, kadib safar shaqo oo uu ugu maqnaa magaalda Brussels ee Dalka Belgium. Madaxweynaha Dowladda Puntland iyo wafdiga uu […]
Dad badan ayaa ku dhintay dab ka kacay dalka Giriiga
Boqolaal ruux oo shaqaalaha dabdamiska ah ayaa ku hawlan daminta dabka, dadkuna waxay isaga carareen guryahoodii u dhawaa magaalada caasimadda ah ee Athens. Waxaa socda hawlgal lagu baadi goobayo 10 ruux oo dalxiise yaal ah oo doon raacay iyaga oo […]